Home » သတင်း » Rising Sun ကရုပ်ပုံများ VFX စူပါစတားများ၏ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများလေ့
Rising Sun ကရုပ်ပုံများ VFX စူပါစတားများ၏ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများလေ့
စတူဒီယိုရဲ့ဘွဲ့ရလက်မှတ်အစီအစဉ်များအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအတွက်အလုပ်အကိုင်များကိုတစ် Springboard ဖြစ်လာကြပါပြီ။
Adelaide, တောင်သြစတြေးလျ- အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအနုပညာရှင်တွေအယောင်ဆောင်များအတွက် stardom ဖို့လမ်းကြောင်းကို ပို. ပို. Adelaide, တောင်သြစတြေးလျကစတင်ခဲ့သည်။ Adelaide အခြေစိုက်ထားတဲ့ Rising Sun ကရုပ်ပုံများ, အပါအဝင်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုဖန်တီးခြင်းအတွက်ယင်း၏အလုပျအတှကျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကောင်းချီးစပါးကိုရိတ်လိုက်ပါတယ် X-Men: အနာဂတ်အတိတ်၏နေ့ရက်များ, Thrones ၏ဂိမ်း နှင့်လာမည့် Thor Ragnarokဒါပေမယ့်လည်းအနာဂတ်အခွက်တဆယ်ဘို့လေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်အဖြစ်ကြီးထွားလာဂုဏ်သတင်းရထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ပိုင်းသြစတြေးလျတက္ကသိုလ်နှင့်အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲမှာ operated RSP ရဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစည်းကမ်းတစ်ခုအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးဘွဲ့ရလက်မှတ်အစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်း, ထိုသို့ကျောင်းသားများကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များမှစာသင်ခန်းကနေရွှေ့ကူညီမှုအတွက်တစ်ဦးအထင်ကြီးတွင် track record စုဆောင်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကျော်, RSP-ရှိရာအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးလျှင် 22 ကျောင်းသားများအားကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားင့်သူအချို့ 10 ကျောင်းသားများကိုအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယိုသြစတြေးလျနှင့်အခြားနေရာများတွင်မှာ paid အလုပ်အကိုင်သို့တိုက်ရိုက်သွားပြီစာသင်-ပါပြီ။
"ဒါဟာစိတ်ကူးနေပါတယ်" အန်နာ Hodge, ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျအ Manager ကပြောပါတယ်။ သူတို့ဒီဂရီတစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာရရှိခဲ့သည်င့်ပြီးနောက် "အများစုကကျောင်းသားများကိုကျွန်တော်တို့ကိုထံသို့လာကြ၏။ ထိုသူတို့အဘို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးပြီးကျောင်းကိုနဲ့တူပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်သင်ကြားပေးကြသည်။ "
ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်မီအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယို၏ဥပစာအပေါ်လေ့ကျင့်နှင့်၎င်းတို့၏ဆရာများအားလုံးအလုပ်လုပ်ပညာရှင်များဖြစ်ကြောင်းထဲမှာ RSP ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကမ္ဘာဘဏ်ဍာနှင့်ကျောင်းသားများအရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုတို့အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်မျှော်လင့်ထားကြသည်တူသောအတန်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဆိုပါအတန်းလည်းမြင့်မားဖန်တီးမှုဖြစ်ကြပြီးငယ်ရွယ်အနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ထားသည့်စည်းကမ်းမှာသူတို့ရဲ့အတောင်ပံဖြန့်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ Dynamic အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့အလင်းအစီအစဉ်များအတွက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ခြေရာကောက်အတွက်ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်နှင့်ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အတွက်စာရင်းသွင်းကျောင်းသားများမကြာသေးမီကတစ်ခုမူရင်းအတိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်အထိပူးပေါင်း။ ဒါဟာလာမယ့်လက၎င်း၏ကမ္ဘာကြီး Premiere ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဂုဏ်သိက္ခာ Adelaide ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့လက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည်။
RSP ဘွဲ့ရငှါးသောအခြားအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယို Edge ဖြတ်တောက်ခြင်းတိရိစ္ဆာန် Logic, ဗဓေလသစ် VFX, Iloura က The Gingerbread ကလူသား, Foundry နှင့် Apple တို့ပါဝင်သည်။ Studios က RSP-လေ့ကျင့်သင်ကြားအနုပညာရှင်တွေလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုဆောင်ကြဉ်းသောလက်တွေ့ကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလုပ်စည်းကမ်းကိုတန်ဖိုးထား, လင်ကွန်း Wogan မကြာသေးမီကကျောင်းရဲ့ grads သုံးခုအပေါ်ဆောင်ခဲ့သောဗဓေလသစ် VFX မှာ VFX ထုတ်လုပ်သူကပြောပါတယ်။
"အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သို့ fit နိုင်ပြီးလုပ်ငန်းအသွားအလာဖွဲ့စည်းမှုအတွက် Rising Sun ကရုပ်ပုံများဘွဲ့လွန်လက်မှတ်တစ်စိန်ခေါ်မှု၏လျော့နည်းကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်လာစေရန်နှင့်သင်တန်းခြေရာခံခြင်းခဲ့သူကောင်းသော, နိုင်စွမ်းအငယ်တန်းစာစီရှာဖွေခြင်း," Wogan ကဤသို့။ "RSP ဘွဲ့ရ, ကျွမ်းကျင်ကြသည်အသေးစိတ်ကြီးစွာသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည်, လုပ်ငန်းအသွားအလာအခြေခံမူနားလည်ပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအငယ်တန်းငှားရမ်းသည့်အခါကျွန်တော်တစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်ရှာပထမဦးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင်ရနိုင်အဖြစ်အရည်အသွေးအာမခံချက်ကြောင့်အနီးကပ်ဖြစ်၏။ "
မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, အခွက်တဆယ်၏ရောက်လာ၏အကြီးမားဆုံးအကျိုးခံစားခွင့် RSP သူ့ဟာသူဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကငါးခုကျောင်းသားများကိုစာသင်ခန်းကနေန်ထမ်းများရာထူးတိုက်ရိုက် သွား. ယခုခက်ခဲများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုမှလက်မှုပညာကူညီပေးနေကြပါသည် ဟောလိဝုဒ် Blockbuster ။ "န်ထမ်းခေါ်ယူမှုအစဉ်အမြဲအခွက်တဆယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နေကြတယ်" ဟု Hodge ကဆိုပါတယ်, "ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကိုယျ့ကိုယျကို employ နိုင်လျှင်, ကကောင်းတစ်ဦးအရာပါပဲ။ "
အောင်မြင်မှုအောင်မြင်မှု begets ။ အဆိုပါဘွဲ့ရလက်မှတ်အစီအစဉ်များအတွက်အနာဂတ် slot နှစ်ခုအဘို့အ Applications ကိုမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသြစတြေးလျ၌ရှိသမျှသောအစိတ်အပိုင်းများထံမှ RSP ထံသို့လာကြ၏။ အဆိုပါစတူဒီယိုလာမည့်နှစ်တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကကြိုဆိုခန့်မှန်းထားသည်။
ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားတုံ့ပြန်ခုနှစ်, RSP က၎င်း၏အစီအစဉ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ ဒါဟာလာမယ့်နှစ်အတွက် UNISA ရဲ့မီဒီယာဝိဇ္ဇာဘွဲ့အတွင်းမာစတာအတန်းအဖြစ်ယူနစ်ပူဇော်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ "ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်-ပေါင်းစည်းဖို့သင်ယူမှုကြွလာသောအခါအဘယျသို့ကျနော်တို့ကဒီမှာပူဇော်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Hodge ကဆိုပါတယ်။ "ဒါဟာထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖွင့်ကြောင့်ဒီနေရာသြစတြေးလျ, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာတဝှမ်းသာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အသို့ခြေလှမ်းဖို့အဆင်သင့်သောကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်လုပ်သားအင်အား၏ရရှိမှုသေချာ။ "
Applications ကိုယခုဖေဖော်ဝါရီလ 19, 2018 စားသုံးမှုအတွက်ဖွင့်ကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်လည်ပတ်: education.rsp.com.au/sunisa/ သို့မဟုတ်အန္န Hodge မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် learn@rsp.com.au
Rising Sun ကရုပ်ပုံများ (RSP) မှာကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဓိကစတူဒီယိုများအတွက်တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုဖန်တီးပါ။ ထူးချွန်ပုံရိပ်တွေ Creating ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၏အဓိကမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရမီအသင်း၏စိတ်နှလုံးမှာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု-set ကိုကျနော်တို့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ကြီးမြတ်ပုံရိပ်ယောင်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်မည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် core ကိုဖွင့်လျက်ရှိ၏။ ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းစိန်ခေါ်မှုအလုပ်ဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်ပေးသဖြင့်အချို့အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအလုပ်အောင်မြင်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်စကေးဖို့စွမ်းရည်များနှင့်အခွက်တဆယ်ရေကူးကန်ရှိသည်။
ပေါကလစ်, Thrones ရာသီ 100, Tarzan ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ၏ဂိမ်း, အီဂျစ်, ပန်, X-Men ကိုးကွယ်ရာ: အနာဂတ်အတိတ်၏နေ့ရက်များက The Hunger Games ဂိမ်း, အဟယ်ရီကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့် filmography Logan အပါအဝင်6စီမံကိန်းများ, X-Men ကျော်ပါဝင်သည် အိုးထိန်းသမားဂိမ်း, ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား, အဆိုပါ Wolverine, Prometheus နှင့် The မဟာဂက်စဘီ။
အရှိန်အဟုန်ရုပ်ပုံများကို Global ရုပ်ရှင် Institute ကအိမ်ရှင်အဖြစ် - ဇူလိုင်လ 13, 2018
RSP လေ့ကျင့်ရေး တီဗီနည်းပညာ Visual Effects	2017-09-13
ယခင်: ရေဒီယိုအကောင့်အလုပ်အမှုဆောင် (အချိန်ပြည့်) #5183
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (525) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Sun ကရုပ်ပုံများ VFX စူပါစတားများ၏ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများလေ့ Rising" ။ http://www.broadcastbeat.com/rising-sun-pictures-trains-the-next-generation-of-vfx-superstars/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။